क्लमको साथ नूडल्स - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
क्लैमको साथ नूडल्स
सूप्स35 मिनेट4 व्यक्ति
यो एक प्रकारको नुस्खा हो जुन मलाई मेरो लागि तयार गर्न मनपर्छ परिवारविशेष गरी केटीहरूको बारेमा सोच्नुहोस्।
यो तयार गर्न को लागी एक धेरै सरल नुस्खा हो, बीचको बीचमा fideuá र एक माछा सूप। यो आधा घण्टा भन्दा बढी लाग्छ र यो शानदार देखिन्छ।
यो एक प्लेट हो जसले हामीलाई खेल्न सक्छ बच्चाहरु que तिनीहरूले यसलाई अचम्मको रूपमा खान्छन्। तिनीहरूले क्ल्यामहरू खान र गोलाहरूमा चुस्न खोजेको देख्दा राम्रो लाग्छ।
मैले यो पकवान देखे र तुरुन्तै यसलाई तयार गर्ने निर्णय गरे। यद्यपि मैले परिवर्तन गरेको छु पानी रकम किनकि मलाई यो अलि बढी सूपी मनपर्छ, तर यदि तपाइँ केहि सुख्खा मनपर्छ भने, तपाइँले कम मात्रामा राख्नु पर्छ।
1 क्लैमको साथ नूडल्स
Fideuá र यसको सबै स्वादमा आधारित एक नुस्खा।
१ प्याज, चौथाई
टमाटर को 400 ग्राम
१ किलो क्लेम (हामीले बालुवा छोड्नु अघि उनीहरूलाई केही घण्टा भिजाउन लगायौं)
G०० ग्राम तातो पानी
एक माछा स्टक घन
300 ग्राम फ्याट नूडल्स (मैले नम्बर5प्रयोग गरेको छु)
गार्निशको लागि काटिएको अजमोद
हामी प्याज, लसुन र तेल गिलासमा राख्छौं र कुचल्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 5.
त्यसपछि हामी फ्राइ गर्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
कुचिएको टमाटर र फ्राई थप्नुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
हामी क्ल्यामहरू भेरोमा र रिजर्भमा राख्छौं।
हामीले तातो पानी गिलासमा राख्यौं। हामी ढक्कन बन्द गर्छौं र वरोमालाई माथि, प्रोग्रामिङमा राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समाप्त भएपछि, हामी भेरोमालाई एकपटक राख्छौं र नूडल्सलाई शीशामा राख्छौं, भोलोमा फिर्ता क्लामको साथमा राख्छौं र हामी चाउचाउ प्याकेजको समय प्रोग्राम गर्दछौं, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चा गति।
यो सेवा गर्न, नूडल्सलाई गहिरो थालमा राख्नुहोस् र माथि क्लेमहरू थप गर्नुहोस् र काटिएको अजमोदको साथ छर्कनुहोस्।
थप जानकारी - मासु फिडुआ
स्रोत - स्पून स्पीड ब्लगबाट परिमार्जित नुस्खा
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, सजिलो, मारिस्कोस, १ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » क्लैमको साथ नूडल्स
धेरै धेरै धन्यबाद, कम्पाई! आज बिहान मैले कस्तो भ्रम पैदा गरें जब म तपाईंको नुस्खा हेर्न गएँ र मैले पढें कि तपाईंले यसलाई समर्पित गर्नुभयो!
सबैभन्दा माथि म तपाईंलाई यस अद्भुत वर्ष र आधाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै मानिसहरूलाई धन्यवाद दिन्छन् जसले हामीलाई पछ्याउँदछन् र हामीलाई उनीहरूको सबै प्रोत्साहन, समर्थन र स्नेह दिन्छन्।
मैले अर्को चरण सुरु गरेको छु, तर म यहाँ तपाईंलाई भेट्न र मद्दत गर्न सधैं आउनेछु।
म पनि VIRTUDES लाई स्वागत गर्न र खुशी पार्न चाहन्छु, जो महान कार्य गर्न निश्चित छन् र हामीलाई केहि अद्भुत व्यंजनहरू देखाउनुहुन्छ।
तपाईं दुबै लाई एक मिलियन चुम्बन र सबै मानिसहरु जसले यो अद्भुत ब्लग अनुसरण गर्छन्!
नमस्कार, नुस्खा एकदम राम्रो देखिन्छ, तर मसँग एउटा प्रश्न छ ... तपाईले स्टक क्यूब कहिले राख्ने भनेर बताउनुहुन्न ... र म यो जान्न चाहन्छु कि यस नुस्खामा नुन छैन। धेरै धेरै धन्यबाद र दुबैलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्! अंगालो
नमस्कार टेरेसा, जब तपाईं पानी थप्नुहुन्छ, र बाटोमा तपाईं एक चुटकी नुन थप्नुहुन्छ।
म कसरी यसलाई Tmx 21 को लागी अनुकूलन गर्छु?
एलेनाको ब्लगको नाम के हो?
म एलेनाको ब्लगको नाममा रुचि राख्छु किनकि मलाई उनी कसरी पकाउँछिन्, धन्यवाद
नमस्ते सिल्भिया, उनले यस ब्ल्गमा रहेको पकाउने विधिहरू जारी राख्नेछन्, ठीक छ, अब तपाईले आफ्नो फोटो राख्नु पर्छ, मैले कोसँग गडबड गरे जो को थिए र अर्को को थिए…।
उनको नयाँ ब्लगमा एलेनाको लागि शुभकामना
MAYELA लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यबाद, मायेला!
कस्तो राम्रो देखिन्छ ...! म पक्का छु मेरी छोरीहरूले पनि यो मन पराउँछन् ... तपाईको छुट्टै यात्रामा दुबैको लागि शुभकामना ... ..,
खाना के बनाउने भनेर सोच्न नसक्नु खुशीको कुरा हो किनभने, निश्चित रूपमा तपाईले यसलाई अचम्मै तरिकाले समाधान गर्नुभयो ... र तपाईलाई धन्यबाद दिन्छु कि मैले थर्मोमिक्ससँग सम्बन्धित प्रयोग गरें। ओह, र अब मतदान गर्न ... ..
नमस्ते सिल्भिया, दिनहुँ धन्यबाद, तपाईलाई थाहा छैन कि कसरी खाद्यान्न समस्या समाधान गर्नुहुन्छ, म तपाईलाई लामो समयदेखि पछ्याउँदै छु, सधैं तपाईले दिनहुँ के प्रकाशित गर्नुहुन्छ भनेर मेलको प्रतिक्षा गर्दै। म तपाईंलाई ब्लग मा एकल यात्रा मा प्रोत्साहित गर्दछ।
तपाइँको समर्थन को लागी Inma धन्यबाद। चुम्बन
नमस्ते भव्य! सबैभन्दा पहिले, यो नयाँ चरणमा खुशी हुनुहोस्, निश्चित रूपमा तपाईंले आश्चर्यजनक तरिकाले यो गर्नुभयो। खैर, मैले तपाईंलाई एक ईमेल पठाएको छु किनभने म तपाईंलाई Thermorecetas को नयाँ चरणमा सहयोग गर्न खुशी हुनेछ।
अर्को कुरा, क्ल्यामका साथ यी चाउचाउहरू भव्य देखिन्छन् ... आऊ, म यस हप्ताको अन्त्यमा बनाउँदैछु ...
पाठ्यक्रम निश्चित रूपमा बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि उत्तम र आदर्श देखिन्छ, तर मसँग एउटा क्वेरी बनाउन चाहन्छु, तर मेरो प्रश्न निर्देशित छ कि मसँग दुई साना २-वर्ष केटी छन् र मलाई थाहा छैन। यो सम्भवतः वरोमा समावेशमा सम्भव हुनेछ, उदाहरणको लागि, हेक किनभने मलाई श doubt्का छ कि क्लैमहरू यति थोरै छन् कि उनीहरू खान सक्छन् कि खान सकिन्छ, मलाई थाहा छैन, म एक नयाँ हुँ र त्यस्तै हुन्छ ...
सबै चीजको लागि धेरै धन्यवाद
म यो ब्लग फेला पार्न पाउँदा खुसी छु किनभने यसले मेरो श्रीमान्लाई हरेक दिनको खाना र साताको अन्त्यका लागि प्रतिक्षा गर्दछ ताकि ऊ तिम्रो केहि रेसिपीहरुमा उसलाई चकित पार्न सक्छ!
मारिया, यदि तपाइँ सक्नुहुन्थ्यो, र तिनीहरूले निश्चित रूपमा यसलाई राम्रोसँग खान्छन्।
मारिलो जिमेनेज भन्यो
यो रेसिपी एकदम राम्रो हुनुपर्दछ, म तिनीहरूलाई भोलि बनाउनको लागि क्लैमहरू किन्छु।
व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
Marilo jimenez लाई जवाफ दिनुहोस्
शुद्ध गार्सिया भन्यो
यो अति उत्तम देखिन्छ र त्यसैले यो स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, म यसलाई भोलीको लागि तयार गर्नेछु, विचारको लागि धन्यवाद।
Inmaculada Garcia लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, मँ ब्ल्याग अवार्डमा कसलाई मतदान गर्न सक्छु? इन्टरनेट वा साधारण मेल द्वारा यदि उनीहरूले मलाई तुरून्त भन्छ भने म आफ्नो मतदान दिन्छु किनकि मलाई यो ब्लग मनपर्दछ,
मलाई थाहा थिएन कि उनको फेसबुक नाममा ठेगाना छ जुन के हो?
व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद
उदय गर्न जवाफ दिनुहोस्
फेस ग्रुपलाई "थर्मोमिक्स रेसिपीहरू" भनिन्छ र तपाईंले ब्लग अवार्डहरूको लागि भोट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दायाँपट्टि रहेको ब्लगमा क्लिक गरेर जहाँ यसले ब्लग अवार्डहरू भन्छ र यसले तपाईंलाई भोटिङ पृष्ठमा लैजान्छ।
मलाई लाग्छ कि यदि हामी केहि झींगा थपेमा, यो पनि राम्रो हुनेछ।
राम्रो हेर्दै, यो एक भोलि खस्छ, दुईमा राम्रो भाग्य।
शुभकामना एलेना !!!! हेरौं कि यदि तिनीहरूले तपाईंको ब्लगमा लिंक राख्न यो थाहा पाए भने!
यो नुस्खा स्वादिष्ट देखिन्छ, म नूडल्स मन पराउँछु!
मानुएल जीसस कामाचो रोमरो भन्यो
मलाई मधुमेह रोगीका लागि रेसिपी चाहिन्छ।
म्यानुएल येशूलाई जवाफ दिनुहोस् कामाचो रोमेरो
त्यो राम्रो देखिन्छ, मेरी आमा।
डिश स्वादिष्ट देखिन्छ। हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्नेछ, यद्यपि मसँग टीएम २१ छ र मैले यो पत्ता लगाउनु पर्छ कि यो राम्रोसँग बाहिर जान्छ ... र यदि होईन ... म यसलाई परम्परागत तरिकाले गर्छु र त्यो नै हो। hehe!
मलाई यो थाल साँच्चै मनपर्‍यो।
शुभकामना सिल्भियालाई उनको नयाँ यात्रामा, तपाईंले एक धेरै राम्रो जोडी बनाउनुभयो।
डेल्फीलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले लन्चको लागि प्रशस्त मात्रामा काम गरेको छु र केही थोरै प्रस्ताव राखेको छु र सोफ्रिटोमा मैले एउटा सानो मदिरा पनि हालेकी छु र म पुनः प्राप्त भएको छु।
CHARO लाई जवाफ दिनुहोस्
के वाचा गरिएको छ debtण हो !! क्लम मार्चिंगको साथ केहि नूडल्स: http://saborimpresion.blogspot.com/2011/09/fideos-con-almejas.html
हामी यसलाई माया गर्छौं, १० म तपाईंलाई दिन्छु !! एउटा चाउचाउ मात्र बाँकी रहेको थियो। नुस्खा को लागी धेरै धन्यबाद। कुल विजय।
यस नुस्खाका लागि धन्यबाद, यो राम्रो देखिन्छ, तर मेरो प्रश्न हो, के स्टक क्यूबले हामीले तातो पानीलाई प्रस्तुत गर्ने क्षण प्राप्त गर्दछ?
ELENA लाई जवाफ दिनुहोस्
वास्तवमा एलेना, यो हुन्छ जब हामी पानी राख्छौं। माफ गर्नुहोस्!
सर्वप्रथम तपाईलाई भन्नुहोस् कि म कहिले लेख्ने हिम्मत गर्दिन तर तपाईका व्यंजनहरू पालना गर्छु र म तिनीहरूलाई माया गर्दछु।
मैले यस नुस्खेलाई सप्ताहन्तमा बनाएँ र यो स्वादिष्ट छ।
मैले केही भिन्नताहरू गरें, मैले १/२ किलोग्राम झींगा थपे, त्यसलाई खार्ने र खोलहरू पकाउँथ्यो र नुहाउने क्रममा पानी र स्टक क्यूब थपेर मैले गोलो पकाउन ब्रोथ जोडेँ।
त्यसपछि मैले चाउचाउ पकाउने समयमा क्ल्यामको माथि रहेको भेरोमा ट्रेमा अन्तिम मिनेटमा "झिंगा" राखें।
सिल्भिया, नुस्खा र तपाईंको समर्पण को लागि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईं हाम्रो लागि जीवन थोरै सजिलो बनाउनुहोस्।
Ppa लाई जवाफ दिनुहोस्
ओल्गा गोन्जालेज अल्भरेज भन्यो
तपाईले number नम्बरको चाउचाउ कहाँ किन्नु भयो मैले फेला पारेन ????
ओल्गा गोन्जालेज अल्भरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते ओल्गा, केहि पनि हुँदैन यदि तपाईले नम्बर5नूडल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, तपाईले भेट्न सक्ने नजिकको नम्बरको साथ एउटा प्रयोग गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, नम्बर perfect उत्तम हुन्छ)। भाग्यमानी!
म कसरी नुस्खालाई Tmx २१ लाई अनुकूलन गर्न सक्छु? शुभकामना एलेना र म तपाईंलाई तपाईंको नयाँ ब्लगमा पछ्याउनेछु।
नमस्कार, मैले यो पहिले नै धेरै पटक गरिसकेको छु र यो निकै राम्रो भयो।
यदि तपाईंसँग केही शोरबा छ भने, धुवाँ जुन तपाईंले धानको लागि तयार पार्नुभएको छ, यो विशेष हो। यदि तपाईंसँग यो छैन भने पनि, माछा शेयर ट्याब्लेटको साथ यो राम्रोसँग बाहिर आउँदछ, र यदि तपाईंले केसरको केही थ्रेडहरू बनाउनुभयो भने, यसले एक विशेष सुगन्ध दिन्छ।
झींगाको साथ, र क्लैम मुनि पनि मैले भेरोमा केही स्कीनलेस हेक फिललेटहरू थप गर्दछु।
यो एक रेस्टुरेन्टमा भन्दा राम्रो बाहिर आउँछ !!!
आज मैले खाजाका लागि यो बनाउने विधि बनाएँ र मैले यसलाई धेरै प्राप्त गरें, मैले १०० ग्राम थपे पनि। पानीको चाउचाउ एकदम सुक्खा छ, क्लामहरू धेरै खोलिएका छैनन्। यो तपाइँको रेसिपीहरूसँग मसँग हुनु सामान्य कुरा होईन, मलाई थाहा छैन यो सामान्य हो कि होइन र उनीहरूले त्यसरी नै रहनु पर्छ।
हेलो एलेना, म तपाईको ब्लग लाई धेरै मन पराउँछु, तर मलाई कुनै पनि प्राप्त गर्न क्लिक नगर्नुहोस् केवल मलाई मेसेज पृष्ठमा हेर्नुहोस्।
Elsacampo लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले के गर्नु पर्छ रातो अक्षरको साथ शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्।
बाख्रा पनीर संग Spirals
सुन्तला कारमेल केक